Quique Setién oo ka hadlay xaalada Messi iyo Suarez kahor kulanka Mallorca – Gool FM
Quique Setién oo ka hadlay xaalada Messi iyo Suarez kahor kulanka Mallorca
(Barcelona) 12 Juun 2020. Tababaraha kooxda Barcelona Quique Setién ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in labada xiddig ee Lionel Messi iyo Luis Suarez inay diyaar u yihiin inay ka qeyb galaan kulamada kooxda ee soo socda.
Quique Setién ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka habeen dambe ay Barcelona booqan doonto kooxda Mallorca.
Barcelona ayaa ciyaari doonta kulankeeda ugu horeeyay kaddib dib u soo laabashada horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaddib markii in mudo ah loo joojiyay caabuqa Coronavirus.
Lionel Messi ayaa dhaawac ka soo gaaray dhaawac yar intii lagu jiray tababarka Barcelona maalmihii la soo dhaafay, taasoo ka dhigtay inuu ka maqnaado tababarka kooxda maalmihii la soo dhaafay, laakiin hadda diyaar ayuu noqday.
Dhinaca kale Luis Suarez ayaa dib u soo laabtay kaddib 6 bilood oo uu maqnaa sababo la xiriira dhaawac jilibka ah ee soo gaaray bishii January ee la soo dhaafay, laakiin dib u dhaca ku yimid horyaalka ayaa ka caawisay inuu soo laabto.
Horudhac: Mallorca vs Barcelona… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka hoggaamiyeyaasha horyaalka ay dib ugu soo laabanayaan La Liga)